तपाईको यस्तो बानी छ भने एकदिन पक्का हुनेछ डिप्रेसन ! – aajnepal
HomeRochakतपाईको यस्तो बानी छ भने एकदिन पक्का हुनेछ डिप्रेसन !
एजेन्सी । तपाई कुन समय उठ्नुहुन्छ र कुन समय सुत्नुहुन्छ भन्ने कुराले डिप्रेसनको सम्भावना निर्धारण गर्दछ । कयौं मानिसहरुको राति ढिला सुत्ने आदत हुन्छ ।
अझ अहिलेका किशोर किशोरी त राति अबेरसम्म मोबाइलमै विजी रहन्छन् । बिहान छक्काल हुँदासम्म उठ्दैनन् । यो पटक्कै राम्रो बानी होइन । ढिला सुत्ने तथा ढिला उठ्ने व्यक्तिमा टाइप २ मधुमेहको जोखिम उच्च हुने विज्ञहरुले औंल्याएका छन् । हालै भएको एउटा शोधले यस्ता व्यक्तिमा मोटोपना तथा मुटुसम्बन्धी रोगको जोखिम बढ्ने देखाएको छ ।
गलत खानपान : बिभिन्न शोधहरुले जनाएअनुसार राती ढिला सुत्ने व्यक्तिमा खानपानसम्बन्धी गडबडी धेरै हुन्छ । उनीहरु ढिला उठ्ने भएकाले विहानको खाना समयमा खाँदैनन् । सागसब्जी तथा फलफूल पनि कम सेवन गर्छन् । त्यस्तै, उनीहरुले एकैपटक प्रशस्त खानेकुरा खाने गर्छन् । यसले स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्दैन ।
डिप्रेसन : बिहान अवेरसम्म सुत्दा दिमाग तथा हर्मोनमा समेत असर पर्ने गर्छ । एक शोधले देखाएअनुसार ढिलो उठ्ने व्यक्तिहरुमा डिप्रेसन र दुखको भाव पैदा हुन्छ । यसले मस्तिष्कको विशेष भाग खराब हुने गर्छ । जसका कारण उनीहरुमा तनावको समस्या धेरै हुने गर्छ ।
बानी व्यवहोरा : राती ढिला गरी सुत्ने व्यक्तिमा ‘अब्सेसिभ कम्पल्सिभ डिसअर्डर (ओसिडी० को जोखिम पनि उच्च हुने गर्छ । यो कुरा पहिले भएका शोधहरुमा समेत पुष्टि भैसकेको छ ।
शोधका अनुसार ओसीडीको समस्या हुने व्यक्तिमा एउटै व्यवहार बारम्बार दोहोरिने गर्छ । त्यस्तै, उनीहरु धेरै सन्की पनि हुन्छन् । उनीहरुले मानिससित गर्ने व्यवहार पनि भिन्न किसिमको हुन्छ ।
जतिबेला पनि ‘सेक्स’ गर्न मन लाग्थ्यो, दिनमा ५ पटकको सम्बन्धले पनि चित्त बुझेन (भिडियो)